JACAYLKII SOO RAFAADAY. | Maankaab.com
JACAYLKII SOO RAFAADAY.
19th September 2017 | Published by: maankaab
Goobtu waa Hadhagaala. Waa magaalo lagu yaqaan neecaw wanaagsan iyo carrasan. Waxa magaalada dhinac marta dixda caanka ah ee Habaqo. Waa dix biyo macaan. Ciddii maruun soo booqata Hadhagaala, xasuus gaara ayey biyaheedu ku reebaan. Waxa mara khadka tareenka ee xidhiidhiya Jabuuti iyo Diridhaba. Dhallinyarada ku dhalata Hadhagaala jiil kasta waxa ka soo mudha oo u kaca dhallinyaro indhaha buuxisa oo hadal hayntoodu meelo fog gaadho gaar ahaan hablaha. Sheekadan jacaylka ahi waa mid dhab u dhacday oo aan goobjoog u ahaa mana aha mid male awaala. Laba ka mid ah dhallinyaradii kacday toddobaatannadii bilawgoodii ayuu jacaylkani dhex maray. Waa Cambaro iyo Buux. Buux markii uu qoofilka ahaa waalidkii Jabuuti ayey u qaadeen, halkaas oo uu waxbarashada ka bilaabay, hasa yeeshee gu’walba Hadhagaala ayaa uu u soo xagaa bixi jirey oo marna ma seegi jirin. Markuu waxbarashadii dhammaystay shaqo ayuu ka helay shirkadda tareennada ee Jabuuti. Bisha fasaxa ah ee uu xeerka u leeyahay Hadhagaala ayuu ku qaadan jirey.
Cambaro iyadu Hadhagaala geesna umay dhaafin. Waa gabadh Ilaahay qurux iyo asluub badan ku mannaystay, ayaan-darro se dugsi lagu ma darin oo guri-joog bay ahayd. Labada qoys ee ay ka kala dhasheen caan bay ka ahaayeen Hadhagaala gaar ahaan labada aabbo, magacyadooda meelo fog baa laga yaqaanay waana ganacsato ka mida dadka ugu nolol wanaagsan magaalada.
Cambaro iyo Buux tan iyo yaraanti way is yaqaanneen guryahooduna ma kala fogayn. Buux intii uu dugsiga ku jirey ayuu jacaylku haleelay wuu se qarsanayey. Markuu shaqada helay dabadeed ayuu u badheedhay in uu Cambaro ka war geliyo kalgacaylka uu u qabo. Durbadiiba dhib buu kala kulmay sidii uu Cambaro gooni ugu heli lahaa, waayo magaaladu waa mid dadkeedu is wada yaqaan, wuu ku dhici waayey in uu dharaar cad la hadlo. Gabbalba haddii uu dhaco Cambaro looma oggola in ay kidinka is taagto, soo bixid la’aanta habeenki hablaha kale ee magaalada ayey kala mid ahayd. Maalin walba markuu gabbalku sii dumayo meel ku toosan guriga Cambaro ayuu is taagaa si fiidka hore uu maruun ula kulmo haddii ay soo baxdo. Bil dhan oo uu fasax ahaa ayuu 15 maalmood halkaa ku dhammaystay. Habeenkii 16-aad ayuu fursad kooban u helay iyada oo dukaan aan gurigooda ka fogeyn ka soo adeegeysa. Buux degdeg ayuu tallabada u soo dhuftay isaga oo is leh caawa yaanay fursaddani ku dhaafin, magaalada waddooyinkeedu waa mugdi oo laydh ma laha. Cambaro aqalkooda iyo dukaanka inta u dhaxaysa ayuu is taagay. Durba way isa soo rogtay, waxay ku soo baxday Buux oo meel dhexe taagan. Cambaro ma nabad baa ayuu ku salaamay. Waa kuma? Waa Buuxe ii warran buu yidhi, waar Buux ma adigii baa? Bal ii warran, beryahan oo dhan waxaan ku arkaa adoo meelahan jooga e’.
Buux oo wax uu ku hadlo garan la’ bay hadalkii u furtay. wuu dhiirraday isaga oo ku dadaalaya in aan caawa fursaddan koobani si dhayal ah ku dhaafin. Kuu warramay Cambaro oo war weyn baan kuu sidaa ee ha lagu helo. Waayahay bay tidhi iyada oo xishood badani ka muuqdo oo tallaabada sii qaadaysa, nabad gelyo bay tidhi, habeen wacan buu isna u celiyey. Ayaan wanaaggiisa habeenkaa Buux waxa u suura gashay inuu indho jacayl ku eego Cambaro. Inkastuu wax jacayl ah u sheegin habeenkaa haddana Cambaro dareen baa galay. Habeenkaa Buux waxay u ahayd bilaw farxadeed. Toddobaadkii xigay saddex habeen bay si qarbaqarba ah u kulmeen, hasayeeshee kulankii u dambeeyey Buux waxa u suura gashay in uu jacaylkiisa u bandhigo Cambaro. In kasta oo ay soo dhaweysay haddana waxa u dhinnaa haasaawe dheer oo ay ku ogaato weydiimo badan oo madaxeega ka guuxayey kuna wareegayey.
Colaad aan la filayn
Halkaa marku jacaylkii marayo ee uu waddo toosan cagta saaray ayaa waxa dhacday arrin aan haabkaba lagu hayn oo jacaylkii Cambaro iyo Buux ku noqotay tiir bira lagana gudbi karin oo dhib badan. Allow sahal amuuraha, tolow arrintan jacaylkii soo hirdiday waa maxay? Ma is afgaranwaa soo kordhay baa? Ma gabadhii buu nin kale soo doonay? Mise waa dhib meel kale ka timid? Waa midda koowaade, is afgaranwaa iyo wiil kale oo u soo dadab galay midna ha u malayn.
Waa arrin kale oo ah, colaad ka dhex oogantay labada qoys ee ay ka soo kala jeedaan Buux iyo Cambaro, gaar ahaan labada aabbo. Colaaddaa oo mararka qaar la isku fara saaray. Murugo weynaa! Inkasta oo guddiyo dhawr ah oo u gar qaadda labada oday loo saaray haddana colaaddii labada qoys waa loo maara waayey dawadeediina way laalantay. Dhinaca kale intii dagaalka labada qoys socday jacaylkii Cambaro iyo Buux uu sii xoogaystay oo wax la qariyo ka weynaa. Laba wiil oo ka tirsan qoyska gabadha ayaa ogaaday haasaawaha la qarin kari waayey ee inantooda iyo Buux ka dhexeeya.
Dabadeed gaadh iyo ilaalo joogta ah oo xamaasadi waddo ayaa Cambaro lagu wareejiyey, waxa xitaa adkaatay in ay kulmaan daaye in indhohoodu mar is qabtaan. Cambaro iyo Buux midba dhankiisa ayuu jiifka qaban waayey, intaas oo dhan waxa ka daran fasaxiisii oo ay dhawr maalmood ka hadhay. Rag xeeladi kama dhammaatee waxa uu raadsaday cid si daacada ugu miciinta una xidhiidhisa isaga iyo jacaylkiisa. Gabadh ay walaashii jaal yihiin oo uu ku tuhmay garaad iyo degganaan ayuu si rasmiya ugu bandhigay haasaawihii iyo jacaylkiisii dhibtu la soo deristay. Gabadhu waa Xasna Khayrre oo gaari naxariis badan ah. Ballan cad ayey u qaadday Buux inay hawsha si deggan u geli doonto. Waa wiil jacayl hayo e durba Xasna ayuu ka codsaday in ay caawadaa war dhan ka keento Cambaro, waayo buu yidhi fasaxii baa iga dhammaaday oo berri ayaan tareenka raaci doonaa.
Xasna labada qoys midna kama tirsana oo cidina ma tuhmayso Cambarana aad bay isku yaqaanniin. Xasna hawshii bay guda gashay, isla habeenkiiba war iyo farriimo ay is waydaarsadeen bay u kala qaadday, ballanna way qaadday in ay iyadu labadooda xidhiidhin doonto inta arrimuhu murugsan yihiin.
Berigaa isgaadhsiintan casrigaahi ma jirin. Isgaadhsiinta keliya ee waagaa jirtay Hadhagaala waa ta shirkadda tareennada oo keliya. taas oo loo yaqaan siligga, waxa lagu kala hagaa tareennada habeen iyo maalin is waydaaranaya ee xidhiidhiya Jabuuti iyo Diridhaba. Mararka qaarkood dadku way ku wada xidhiidhaan hasayeeshee mid madax bannaan maaha oo sir lagu qarsan karo. Buux waa nin wax qora waxna akhriya Cambaro se nasiib umay helin waxbarasho. Haddii uu xaashiyo u soo qoro waa in cid kale u akhrido, taasna uu ka maagay isaga oo ka baqay in ay meesha soo gasho sheekadii ahayd” Aqoondarro waa u nacab jacayl”.
Maalintii xigtay isaga oo aad mooddo in dhibaato adduun u dhammaatay ayuu Hadhagaala ka dhoofay. Wuxuu tareenku sii gigleeyaba goor fiid ah ayuu Jabuuti galay. Waaberigii ayuu shaqa tegay isagoon laba baal isasaarin. Waa ruux fasax ka soo galaye asxaabtiisii ay wada shaqaynayeen baa soo dhawaysay oo wada salaantay. Dadku way wada dareemeen in Buux hawli ku soo korodhay, waayo? Gu’yaashii hore markuu fasaxa ka soo galo isagoo nuuraya oo nasasho jidhkiisa ka muuqato ayuu iman jiray. Markan isaga oo daallan oo hurdo seexan oo caatoobay buu shaqada soo galay. Asxaabta qaar baa u badheedha oo ku yidhaa, awal hore adiga oo nuuraya baad iman jirtaye markan maxaa kugu dhacay? wuu iska aamusaa oo erey keliya ahi afkiisa kama soo baxo. Buux fasaxa kan ugu xigaa waa gu’ga dambe, waa inuu labiyo toban bilood sugaa. Allow samirka u adkee! Buux sannakii waxa uu ku noqday midaan dhammaanayn oo toban gu’ kaga badan.
Maadaama uu ka tirsan yahay shaqaalaha shirkadda tareennada waxa u fudud in uu siligga kula xidhiidho magaaladii jacaylka, hasayeeshee qofka ku hadalaya siligga si gooniya uma helo, cidda goobta joogta oo dhan baa maqasha, waa meel aan sir lagu qarsan karin haddana dan baa tidhi in Buux marmar adeegsado siligga. Qolka siligga ee Hadhagaala qofka maalintaa shaqaynaya weydiin keliya ayuu waraystaa, aabbahay iyo odaygii hebel ma heshiiyeen? Warcelinta uu helaa goor walba waa midaan isaga farax gelin. Marka labaad Xasna Khayrre iigu yeedha ayuu codsadaa, waa haddu helo cid garanaysa. Si uu Xasna ula hadlo mararka qaarkood saacado badan bay qaadataa. Markuu Xasna helo si guud buu u waraystaa isagoo leh, iska warrama dhammaantiin? Xasna oo ah gabadh garaad iyo wanaag Ilaahay ku mannaystay markay war siinayso Buux, si qurux leh oo sarbeebi ku ladhan tahay ayey u tilmaantaa in Cambaro aad iyo aad u fiican tahay isla markaana ay isaga keliya sugayso. Maalinta uu Xasna war ka helo isaga waa u farax. Maalintii Ilaahay keenaba rakaabka la socda tareennada soo gala cid hadduu ka garto uu waraystaa. Aabbahay iyo odaygii hebel ma heshiiyeen? Ayuu la soo boodaa. Sannadkaa oo dhan jawaabta uu helayey waa maya. Murugo weynaa! Labiyo toban bilood ayuu saxariir iyo rafaad ku dhammaystay. Haddeed xilligii nasashada iyo fasaxa ayaa u soo galay.
Qalinkii: Cabdalle Xaaji Cismaan.